Feo - Alerts - amin'ny B787 Ahoana no hamono?
fanontaniana Feo - Alerts - amin'ny B787 Ahoana no hamono?
2 taona 4 herinandro lasa izay - 2 taona 4 herinandro lasa izay #475 by FlyingFranz
Vao alaina ny B787 Dreamliner avy Ricoooo ka nametraka azy.
Na izany aza, raha manidina, ny hafatra mailo toa mafy ao amin'ny cockpit.
Tsy nahita hoe aiza no deactivate izany.
Tsy manana olana amin'ny hafa izany aircrafts. Fotsiny izy ireo mampiseho ny fanairana teo amin'ny efijery (ambany ankavanana.)
Izay mety ho fanampiana azafady.
Fanovana farany: 2 taona 4 herinandro lasa izay FlyingFranz.
2 taona 4 herinandro lasa izay #476 by Gh0stRider203
Izaho manokana manampy nahita azy, fa samy ny eh?
Avy eo indray, misy fotoana aho tena tsy tia ny "Bitching Betty" LOL
fa tsy sarotra. Goto fotsiny fampirimana ny feo fa fiaramanidina manokana, ka hanova ny sound.cfg rakitra ho an'izany fiaramanidina, hanova ny efa misy Filename mba "Filename = fahanginana"
Tokony manamboatra izany, Heveriko fa ... LOL tsy nanonona Ahy amin'izany araka izay mbola tsy nanandrana izany teo aloha.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: FlyingFranz
2 taona 4 herinandro lasa izay #477 by FlyingFranz
Misaotra ny valinteny haingana.
Niezaka aho ... Tsy misy tsara!
Tsy misy toko "Sound fanairana" ao amin'ny rakitra sound.cfg noho izany fiaramanidina manokana.
Misaotra ihany. Hanandrana indray aho amin'ny alalan'ny fampitahana izany sound.cfg rakitra mitovy amin'ny hafa raki-daza.
2 taona 4 herinandro lasa izay #478 by Gh0stRider203
Raha ny marina aza aho tsy manidina ny 787 noho ny zava-misy tsotra fa tsy mendrika manana ao amin'ny VA, in My hevitro manokana. Ho ahy, izany rehetra momba ny fanaovana bola, ary raha mety hanana ny 787 akaikin'ny mitovy isan-karazany toy ny 772LR (izay manana), dia tsy afaka mitondra ny mitovy araka ny isan'ny mpandeha hahita amin'ny pikantsary ity .. .which dia midika hoe tsy $ ho an'ny VA.
2 taona 3 herinandro lasa izay #498 by Tonny0909
Fotsiny mahita ireo wav- antontan-taratasy eo amin'ny simobjects / fiaramanidina / planename / feo sy hamafa ireo. ohatra "callout100.wav" sns
2 taona 3 herinandro lasa izay #499 by FlyingFranz
Misaotra ny valiny.
Na izany aza, dia tsy ho azy ny feo izay manorisory, fa ny zava-misy fa tsy azo Novonoiko ity fiaramanidina manokana. Tsy manana ny olana miaraka amin'ny hafa FSX aircrafts ambany.
Ao amin'ny B787 antontan-taratasy, misy fehezan-dalàna iray izay miantso ireo feo fanairana. dia nampikorontan-tsaina indrindra fa raha, ohatra, ny fidinana kely loatra ihany hantsana, ny toa mailo na dia ny tahan'ny marina.
Ny hany azoko natao dia mampihena ny feon'ny mifandray haavon'ny ao amin'ny raki-daza amin ny loha "Re" fampirimana (avy amin'ny 10000 nidina nankany 6000.)
7 volana 1 andro lasa izay #1211 by FlankerAtRicoo
Ampiasao ny [gpws] ao amin'ny aircraft.cfg
Raha tsy misy [GPWS] fizarana iray dia mamorona iray ihany.
Ity fizarana ity dia mamaritra ny antsipirian'ny rafitra fampandrenesana akaiky ny tany.
max_warning_height Ny haavony eo ambany izay fampandrenesana an-dàlana.
sink_rate_fpm Raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina ity fiaramanidina ity, dia misy fampitandremana miverimberina.
excessive_sink_rate_fpm Raha toa ka misy fiaramanidina mihoatra an'io karazana fiantsoana io dia misy fampitandremana maika.
climbout_sink_rate_fpm Raha manidina ny fiaramanidina mandritra ny fisintonana, ary mihoatra noho io fiakarana io, ny fampitandremana dia
flap_and_gear_sink_rate_fpm Raha misy fiaramanidina iray mandehandeha, ary mihoatra ny halaviran'ity fiantsoana tsy misy pentina na famolavolana ity,
fampandrenesana dia mavitrika.
; // Ity Diable ity dia tsy 'milentika', 'faingo kely loatra', sns
; // Courtesy of & Misaotra an'i Rob Barendgret
Fotoana mamorona pejy: 0.289 segondra